Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny UK » COVID-19 furlough dia mifarana amin'ny fotoana ratsy indrindra amin'ny fizahan-tany any UK
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao farany momba ny UK
Ny farany COVID-19 furlough dia tonga amin'ny fotoana ratsy indrindra amin'ny fizahan-tany any UK
Ny mpandinika indostrialy dia maminavina ny fitsangatsanganana an-trano any UK hiverina any amin'ny ambaratonga 2019 mandritra ny 2022, izay hahatratra 123.9 tapitrisa fitsangatsanganana. Na izany aza, ny dia lavitra iraisampirenena dia haharitra kokoa ary tsy hiverina amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID raha tsy amin'ny 2024, izay hahatratra 84.7 tapitrisa ny diany.
Ny faran'ny volom-borona dia tsy mety tonga tamin'ny fotoana ratsy kokoa ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany any UK.
Na dia eo an-dàlana aza ny fanarenana an-trano any UK ho an'ny rebond 2022, ny indostria dia tokony hivezivezy amin'ny vanim-potoana voalohany amin'ny ririnina.
Ny fitifirana fifandanjana dia hiteraka aretin'andoha ho an'ny orinasam-pitsangatsanganana maro - indrindra ireo tena miantehitra tanteraka amin'ny dia iraisam-pirenena.
Rehefa tapitra amin'ity volana ity ny tetika volom-borona any UK, dia voatery manapaka ny vola lany ny orinasam-pitaterana mba hivelomana amin'ny ririnina. Mampitandrina ireo manampahaizana momba ny fizahantany sy fizahan-tany fa mety misy fihenam-bidy ny fepetra toy izany.
Tsy mety tonga ny faran'ny volom-borona fotoana ratsy kokoa amin'ny indostrian'ny dia any UK. Tonga eto amintsika ny vanim-potoanan'ny ririnina, ary ilaina ny fepetra fanapahana vola mba hahavelomana. Mampalahelo fa midika izany fa misy ny fihenam-bidy, satria io no iray amin'ireo fomba mora indrindra itehirizana vola.
Vinavinan'ny mpandinika indostria Fitsangatsanganana an-trano any UK miverina amin'ny ambaratonga 2019 mandritra ny 2022, izay hahatratra dia 123.9 tapitrisa fitsangatsanganana. Na izany aza, iraisam-pirenena Ny dia lavitra dia haharitra kokoa ary tsy hiverina amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID raha tsy amin'ny 2024, izay hahatratra 84.7 tapitrisa ny diany.
Na dia eo aza ny fanarenana an-trano ho an'ny rebound 2022, ny indostria dia tokony hivezivezy amin'ny vanim-potoana ririnina sarotra matetika. Raha tsy misy ny fangatahana sahaza dia hitohy ny famerana ny vola miditra ary hitolona ny orinasa. Ny fifandanjana tsara dia tsy maintsy atao eo anelanelan'ny redundancies sy ny hakingana amin'ny ho avy.
Ny manam-pahaizana momba ny indostria koa dia manasongadina ny loza ateraky ny fandatsahana isa ny mpiasa amin'ireo orinasam-pitaterana UK, raha toa ka manomboka mampihoatra ny mpiasa ny orinasa dia tsy afaka mamaly ny fiakarana tampoka amin'ny fangatahana izy ireo. Ny fitifirana fifandanjana dia hiteraka aretin'andoha ho an'ny orinasam-pitsangatsanganana maro - indrindra ireo tena miantehitra tanteraka amin'ny dia iraisam-pirenena. Ny fanovana haingana ny famerana ny dia dia mety hahita fitomboana tampoka amin'ny fangatahana toerana sasany atsy ho atsy. Raha tsy ampy karama ny orinasa iray, dia mety tsy hahazo ny karama ilaina izany. Mifanohitra amin'izany, ny fitazonana mpiasa be loatra dia mety hiteraka fandaniana tsy voafehy.
Ny fanitarana ny drafitra volom-borona ho an'ny indostrian'ny dia dia afaka mividy fotoana ho an'ny sehatra mandra-pahatongan'ny fanamafisana ny fangatahana. Na izany aza, kely ny fanantenana.